Archive du 20181206
Marc Ravalomanana « Tsy mpamitaka aho, miresaka foana isika…»
Aloarbia Vatosola, Moramanga, Vatomandry, Brickaville, Toamasina, Amparafaravola, Ambatondrazaka,…
Jean Ravelonarivo Tsy maintsy hirosoana ny fifidianana
Nanao fanambarana tetsy amin’ny foiben’ny antokony tetsy Antsahabe indray omaly ny kandida filoham-pirenena,
Fandresen-dahatra ireo mpifidy Raikitra ny « porte à porte » ataon’ny Zanak’i Dada
Ny nilatsahan’ny toromarika no ela dia efa nanomboka ny fitsidihana isam-pokontany sy isan-tokantrano na porte à porte ataon’ireo mpanaradia ny kandida laharana faha-25 Marc Ravalomanana.
Serge Zafimahova “Tanjonay ny hahazo 55% amin’ny fihodinana faharoa”
Mitaky ny fandraisan’andraikitra feno avy amin’ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) ny kandida Marc Ravalomanana sy ny ekipany mba tsy hiverenan’ny halabato sy kolikoly isan-karazany intsony amin’ny fihodinana faharoa,
Ampasikely Ambatondrazaka Hatramin’ny raharaham-piangonana avy no hatakalo propagandy
May volon-tratra ny mpomba ny kandida n° 13 any Ampasikely Ambatondrazaka.
Manohana an'ilay kandida zokiny ve ianao ry namana Sa mbola misalasala amin'izay hotohanana ? Indrisy fa mitovy amin'ny tsy manan-jo ianao vao tsy manohana Fa na ny mpifahavalo aza izao efa lasa mivondrona.
Famonoana mpisolovava teny antanimena Tsy nisy tsindry bokotra izany ny fanadihadiana…
Namaly ireo vaovao nivoaka an-gazety maro samihafa mikasika ilay raharaha famonoana mpisolovava nitranga teny Antanimena iny omaly ny kolonely Randriamanantena Pascal, lehiben’ny sampana misahana ny ady heloka bevava eo anivon’ny zandarimariam-pirenena Fiadanana.
Lalao Kapsilinaka Olona miisa 230.000 no efa nahazo loka
Olona miisa 230.000 hatreto no efa nahazo loka tamin’ilay lalao kapslinakà nokarakarain’ny zava-pisotro Fresh sy ny orinasa Telma tao anatin’ny roa volana.
Baolina Kitra - Fiadiana ny amboaran’i Afrika Raraka ny CNaPS Sport, tafita ny Elgeco Plus
Nifarana hatreo indray ny dian’ny CNaPS Sport Madagasikara amin’ny fandraisana anjara amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika eo
Kidnapping tany Toamasina Olon’ny MAPAR no atidoha…
Manomboka sarona ny atidohan’ny fanaovana fakana an-keriny na « kidnapping » eto amintsika rehefa nandeha ny famotorana lalina ireo sarona tany Toamasina.
Kidnapping tany Manerinerina RN 4 Ankizy vavy roa indray no niharany
Taorian’ilay resaka kidnapping nahazo an’ilay ankizivavy karana 11 taona antsoina hoe Rahima tamin’ny fiandohan’ny volana novambra 2018 lasa teo tany Manerinerina distrikan’Ambatoboeny
Boriborintany fahenina Nilatsaka nanadio ny ekipa teknika
Mitohy hatrany ny asa fanadiovana ataon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA).